The Ab Presents Nepal » २५ करोड बार्गेनिङले खानेपानी मन्त्री विना मगर त’नावमा, बालुवाटारले थाल्यो अनुसन्धान,पद चैटहुने सम्भावना !
२५ करोड बार्गेनिङले खानेपानी मन्त्री विना मगर त’नावमा, बालुवाटारले थाल्यो अनुसन्धान,पद चैटहुने सम्भावना !
काठमाडौं -: केपी ओली नेतृत्व सरकारका एक मन्त्रीले २५ करोड बार्गेनिङ गरेको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले घु’स मागेको भन्दै तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि उनलाई अर्कै मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग मन्त्री मगरले २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको र सो नदिएपछि नेपालबाट लखेटिएको त्यतिबेला समाचारमा आएका थिए ।
मन्त्रीले घु’स रकम माग गरेको अडियो टेप आफूले सार्वजनिक गर्ने भन्दै अहिले पूर्वसचिव ठाकुरसमेत ता’निएका छन् । यो विषयले उ’ग्र रूप लिँदै गएको छ ।खानेपानी मन्त्रालयमा सचिव रहँदा मन्त्रीसँग वि’वाद भएको र त्यसपछि उनलाई जगेडामा राखिएपछि उनले मन्त्री बिना मगरले २५ करोड रुपैयाँ घु’म मागेको र त्यसको अडियो आफूसँग रहेको भन्दै सार्वजनिक गर्ने धम्की’ दिएका थिए ।